UMandla Mandela unesicelo emndenini ozenza izihlobo zabo | News24
UMandla Mandela unesicelo emndenini ozenza izihlobo zabo
Johannebsurg - Umzukulu kaNelson Mandela, iNkosi uMandla Mandela, usecele abesibongo sakwaNgcebetsha ukuba bayeke ukuthi bahlobene nomndeni wakhe.
Uthi kunamalungu omndeni wakwaNgebetsha afuna ukugxambukela ezindabeni zomndeni wakhe.
Usho kanje ekhuluma nabezindaba ngemuva kokuba iNkantolo eNkulu yase-Eastern Cape, eMthatha ichithe isicelo sikaWinnie Madikizela Mandela sokumisa umhlangano okulindeleke ubengoLwesihlanu eQunu, kubika iSABC.
Funda nalolu daba: Sichithiwe isicelo sikaMadikizela-Mandela.
Umhlangano waseQunu kuhlolswe ngawo ukucacisa ukuthi ubani okumele abeyinhloko yomndeni wakwaMandela.
“Baningi abantu abafuna ukuba yingxenye yomndeni, kodwa ke noma ngabe kunelungu elithile eliyisihlobo kwaMandela, abawona amalungu omndeni kababa, umfowabo uThembekile, nomkhulu noma uNkosi Mphakanyiswa.”
“Bayingxenye yomunye umndeni hhayi owami.”